EPC inomiririra Injiniya, Kutenga, Kuvaka uye iri fomu inozivikanwa ye
EPC inomiririra Injiniya, Kutenga, Kuvaka uye iri fomu yakakurumbira yechibvumirano. Iyo yeinjiniya uye yekuvaka kontrakta ichaita yakadzama mainjiniya dhizaini yeprojekti, kutora zvese zvishandiso uye zvinhu zvinodiwa, uyezve vozovaka kuendesa chinoshanda chinzvimbo kana chinhu kune avo vatengi.
Mhepoyakakura ikava kambani inopa yakazara Injiniya, Kutenga, uye Kuvaka (EPC) sevhisi uye inotsigira vatengi vayo mukati mehupenyu hwese hweprojekiti. Kambani ine ruzivo, nyanzvi dzakasiyana siyana dzakazvipira kupa yakazara masevhisi kune avo vatengi kubva kune projekiti kutanga kune dudziro uye dhizaini, kuvaka, kutumira uye kudzidzisa, kushanda uye kugadzirisa. yakazara yakazara masevhisi anosanganisira mainjiniya, dhizaini, kunyepa uye pane-saiti kuvaka.
Neboka rine ruzivo uye ruzivo, chirongwa cheprojekti chakaratidzwa, uye hunyanzvi hwesainzi indasitiri, tinogona kununura chirongwa chako nenguva uye pabhajeti. Isu tinoshumira vatengi venyika uye vepasirese kupfuura nyika makumi masere.